Mufambiro wevadzidzi veThailand
Kuenda kupi uye Zvaunofanira kuita muThailand
Thailand ndeimwe yenzvimbo dzatinogara tichikurudzira kune vafambi vevadzidzi - dzakanaka, dzakasviba, uye dzinotonhora, nemakomo okukwira, mabheti ekudzivirira zuva, jungle kuenda uye nzvimbo dzepasi-rose kuti dziongorore.
Zvinhu Zvokuziva Usati Waenda
Mutauro Wakataurwa: Thai.
Usanetseka pamusoro pekusava kukwanisa kutaura nevanharaunda! Iwe unogara uchikwanisa kuwana mumwe munhu anotaura Chirungu munzvimbo ipi neipi ine vatashanyi.
Kunyange kana iwe ukazviwana uri kumaruwa uko pasina munhu anotaura Chirungu, uchakwanisa kumira kuitira kuti uwane zvokudya, pokugara uye kutakura.
Mari Yakashandiswa: Thai baht
Guta guru: Bangkok
Chitendero: Zvizhinji Buddhism, pamwe nekunamata kweIslam neChiKristu.
Heano mazano edu kune nzvimbo yekushanyira muThailand:
Iko guta guru, Bangkok , zvichida kwaunotanga uye kupedza tambo yako yeThailand. Ichowo pane imwe nzvimbo apo iwe uchanonoka kupedza nguva yakati, kunyange iwe usingaronga kuita kudaro. Ndiyo nzvimbo huru yekufambisa yeThailand uye yakawanda yeSouth-Asia, saka akawanda ndege, mabhazi uye zvitima zvinopfuura nepano.
Ndiri muBangkok, chinangwa chokupedza zvishoma mausiku mashomanana kugoverana paNai San Road, nzvimbo yezvakanaka yevanokurumidza. Iwe haungatongoratidzi chinhu chakafanana netsika yeChitatu mumugwagwa uyu unonyadzisa, asi iyo yerudzi rwekufambisa kune chero mushure mutsva uye inokosha kuongorora vanhu vachiona mikana chete.
Bangkok haisi kungoenda kune dzimwe nyika, zvakadaro. Paunenge uripo, iva nechokwadi chekutarisa zvimwe zvemashamba anotenderera - inonyanya kuzivikanwa ndeyeAmphawa uye nekuda kwechikonzero chakanakisisa - inzwisisiro inonakidza mumutauro weThai. Iwewo unoda kutarisa Grand Palace, Wat Pho uye Wat Arun kuti uwane chiziviso chetemberi dzakanaka dzeThailand.
Chiang Mai ndiro guta rangu raidiwa muThailand - Ndapedza mwedzi mitanhatu ndichigara ikoko! Nhamba yedu yekutanga ndeye Elephant Nature Park - nzvimbo tsvene yakatsaurirwa kununura nzara dzinotambudzwa kubva kumadokero kweSoutheast Asia uye mberi. Iwe uchakwanisa kupedza zuva uchidzidza nezveshefu, nekushamba nekudzipa. Iwe uchadzidzawo kuti sei iwe usingafaniri kumbokwira nherera, saka tapota usatora imwe yenhamba dzenzou dzinoparidzirwa muguta, sezvo idzi dziri utsinye zvikuru.
Chiang Mai izere netemberi uye iwe haungakwanisi kufamba kwemamita anopfuura 50 usingatauri newaini inopenya. Kunyange zvazvo kuneta kwetemberi kuchangoerekana kwasvika, ivai nechokwadi chekuongorora zvishomanana zvetemberi apo iwe uripo - tinoda chaizvo Wat Phra That Doi Suthep, iri pagomo rinotarisa guta racho.
Shanyira Chiang Mai suo (suwo rekumaodzanyemba kwemukoko) manheru manheru uye tsvagai yaPa Pa's zvokudya motokari - ndiyo ine mutsara mukuru. Iko, iwe uchakwanisa kutenga yakanakisisa smoothie yehupenyu hwako uye inongotora makumi mashanu chete! Zvechokwadi Chiang Mai inoratidzika.
Chiang Rai inofadza kwevhiki inonakidza getaway kubva kuChiang Mai uye inogadzira mbiri dzeTemples dzisina kunaka zvikuru.
Iyo White Temple inobwinya uye inobwinya kubva kure asi iwe paunoswedera pedyo iwe uchaona kuti zvifananidzo zvitsvuku uye zvesirivha zviri chaizvo zvisingaenzaniswi zvehero.
Maoko anosvika kumusoro achienda kwauri kubva pasi apo iwe ukayambuka bhiriji, madhimoni anotsika pasi iwe kubva kumusoro. Hamba mukati mutemberi uye uchawana kusanganisa kusina kupindirana kwemifananidzo yeBuddhist yemaitiro pamwe chete nekuratidzwa kwe 9-11, Neo kubva kuMatrix uye zvakasiyana zvakasiyana-siyana zveWintern Wars zvikamu. The Black Temple kunyange mutorwa kupfuura White, nemhuka dzehombodo uye skeltons dzakanamatira kubva kumadziro ose.
Kana uchida kuwana hippie yako paunenge uchifamba, usatarisa kunze kwePai , maawa mashoma kubva Chiang Mai. Iyo nzvimbo yakaisvonaka, izere nerebackback backpackers uye dzinozorodza dzimba dzevaeni, dzose dzakakombwa nedzimwe nzvimbo dzakanakisisa pane dzose yeSoutheast Asia. Uya pano kana uri kutarisa kuti uende kure nemaguta eThai uye upedze nguva yako uchizorodza mune hammock.
Chiang Dao imwe nzvimbo inotora vhiki yakareba kubva Chiang Mai.
Iri runyararo, rakachengeteka gomo reguta rine zvingasarudzwa zvishoma zvekugara. Paunenge uripo iwe unogona kungozorora mu hammock, uchikwira mumakomo ari pedyo kana kuongorora mamwe emapako ari pedyo. Chiang Dao ndiyo yatinotungamira patinotarisa kuti tisiye kubva kune imwe nyika kwemazuva mashoma.
Koh Chang ishivi peparadhiso yevaspackers. Iine hupenyu hwakasununguka chaizvo uye ndiyo iyo nzvimbo yaunogona kugara mumumvuri wegungwa kune madhora anosvika $ 3. Kana ukasarudza kushanyira Koh Chang, zvino tinokwanisa kukurudzira kugara paLonely Beach, uko vazhinji vevachechecheche vanogara. Ikoko, iwe unogona kupisa zuva pakati pemiti yemichindwe nemvura yakanyanyisa mukati mezuva uye kutamba usiku uhwo kuna Bob Marley tunes usiku.
Koh Phi Phi ine mukurumbira sechitsuwa chepati asi iyo ndeye yeimwe yakanaka kwazvo. Pano, unogona kushanyira Maya Bay, chitsuwa chinoshamisa apo firimu The Beach yakashambadzirwa, inotora chikepe kuenda kune zvitsuwa zviri pedyo apo iwe uchawana vanhu vashomanana uye uchikwira kune vanotarisa maonero anoshamisa munyika yose.
Koh Lanta ndiko kwaunofanirwa kuenderera kune iwe kana uchida kupumha kubva kune zvose zvinotengesa. Icho chiri chitsuwa chisina kufara chakanyatsogadzirirwa kwevhiki isati yamboita chinhu kunze kwekushanda kwezuva pamahombekombe uye kushambira mumvura. Paunenge uripo, iva nechokwadi chekutarisa Koh Lanta National Park.
Unoda kuona zvitsuwa zveThai zvaive zvakaita sei vasati vadzoka? Musoro kuKo Yao Noi, iyo yakanyarara, yakasununguka, uye isina zvevashanyi. Paunenge uripo, unogona kuenda kuPhang Nga National Park kuti uone Ko Koh rakanaka, kutora kayak kuti uende kuKoh Nok, udye zvokudya zvekudya zvinonaka, kana kungobhadhara chikoro uye wotasva chikepe.
Zvaunoda Kuziva Nekufamba neTuk-Tuk kuThailand
Nightlife muPai, Thailand
Chizvarwa cheMambo muThailand
Nguva Yakanakisisa Yokushanyira Thailand
Memphis Area 4th of July Zviitiko
5 Best Broadway inoratidza 2017
Mhuri Zororo muIreland Yakagadziriswa
Nyika Dzakaoma Kwazvo dzeAmerica Kushanya
Mutero Wemazuva Ekupedzisira muWashington, DC, Maryland, uye Virginia
Top 10 Museums muGermany
Zvokudya zvakanakisisa zvinomwe 6 muCologne
Nzira Yokuita Nzwisiso yeBritish Castle
Ndakapinda kuCuba kuCastro's Funeral uye Izvi ndizvo Zvakaitika
Charlotte Zviitiko munaNovember
Zvinhu Zvingaitwa Muna October muna Charlotte
Nzvimbo dzepamusoro dzekutsvaga mimwe mitambo paIndaneti
Krisimasi tsika netsika muGreece